drama ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
Ben is Back (2018) ဒီဇာတ်လမ်းက ၂၀၁၉မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးဇာတ်ကား (Cinema for Peace) အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဒရမ်မာကားတစ်ကားပါ ဆေးစွဲနေတဲ့သားကို လူကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်ပြန်လာနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့မိခင်မေတ္တာအကြောင်းဖော်ကျူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ် ဘန် တစ်ယောက် ဆေးပြတ်ပြီးအိမ်ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းပြန်လာခဲ့ပေမယ့် မိသားစုရဲ့ငြိုငြင်မှုတွေ မယုံကြည်မှုတွေကြားမှာ စိတ်ပင်ပန်းစွာဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန် အမေဖြစ်သူက ၂၄နာရီစောင့်ကြည့်ပြီး စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်တယ်ဆိုရင် အရင်လိုပြန်နေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ် ဘန်တစ်ယောက် စစ်ဆေးမှုကိုအောင်မြင်ပါ့မလား ဘယ်လိုအနှောင့်အယှက်တွေဝင်လာဦးမလဲ ဘန်တစ်ယောက် မိခင်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြားမှာ လူကောင်းတစ်ယောက်လို ပြန်လာခွင့်ရနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား
အမ်မာနဲ့ ဒင်းဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူလေးနဲ့ကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်ဟာ အတန်းကလိုက်ပို့တဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့သူနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် အရမ်းကိုတော်ပြီးတော့ ကျောင်းရဲ့အပျိုစင်ကြယ်ပွင့်လေး အမ်မာနဲ့ ကျောင်းမှာဆို ဘယ်သူနဲ့အဆက်အဆံမရှိတဲ့ဒင်းတို့ဟာ ကျောင်းသားတွေခိုးပြီးတော့ကဲကြတဲ့သဘောၤပေါ်ကပါတီကနေ ပင်လယ်ထဲကိုပြုတ်အကျပြီးမှာတော့ သူတို့တွေနိုးထလာတဲ့အချိန်မှာ ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ အရာရာကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့စီစဉ်ထားတတ်တဲ့အမ်မာအတွက်ကတော့ ကျွန်းပေါ်မှာဘာမှမရှိပဲနေရထိုင်ရတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းပေမယ့် သဘာဝကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အေးဆေးနေတတ်တဲ့ဒင်းအတွက်ကတော့ ပျော်စရာခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အားကိုးနေထိုင်ရင်းနဲ့ပဲ အမ်မာနဲ့ဒင်းတို့ကြားမှာရင်းနှီးမှုထက်ကျော်လွန်တဲ့စိတ်တွေပိုလာခဲ့ပါတော့တယ် ဒီတော့ အမ်မာနဲ့ဒင်းနဲ့သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုကျွန်းပေါ်မှာပဲနေထိုင်ရင်းနဲ့ကုန်ဆုံးသွားမလား ကယ်တင်မဲ့သူတွေပဲရောက်ရှိလာနိုင်မလား သူတို့မြို့ကိုပြန်ရောက်သွားရင်တောင် သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာနိင်မလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုလို့ကောင်းတဲ့ဇတ်ကားလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်
Bodyguard 2011 Hindi ဒီဇာတ်ကားကကတော့၂၀၁၁မှာမင်းသားဗီဂျေးရဲ့The Bodyguard နဲ့အပြိုင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့မင်းသားဆလ်မန်ခန်းရဲ့နုနုရွရွဇာတ်ကားလေးပါ ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒီဂတ်ဇာတ်ကားတွေကြည့်ဖူးသမျှ ကားတွေအားလုံးမှာမင်းသမီးကိုစောင့်ရှောက်ရတာတွေပါပဲ ဒါမှလည်းဘော်ဒီဂတ်ပီသမှာကိုး ဘော်ဒီဂတ်လောင်လီဆင်းဂ်ဟာသူ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင် ဘယ်တော့မှမချိုးဖြတ်ပါဘူး ဂျေဆင်ပူးနားရ်စံအိမ်ရဲ့သခင်မစ္စတာဆတာဂျေဟာတရားမျှတမှုကိုလုပ်ဆောင်သူတစ်ဦးပါ တရားမျှတမှုပေါ်အောင်မကောင်းမှုကိုဖယ်ရှားရတာနဲ့အညီ လူဆိုးခေါင်းဆောင်ရန်ဂျန်မဟ်ထွီနဲ့ရန်သူတွေဖြစ်သွားပါတော့တယ် ဒါကြောင့်သမီးဖြစ်သူဒေဗီရာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘော်ဒီဂတ်လောင်လီဆင်းဂ်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တာပါတယ် ဒီလိုနဲ့ဒေဗီရာကောလိပ်တက်တဲ့အခါလိုက်စောင့်ရှောက်ရပါတယ် ဒါပေမဲ့လောင်လီဆင်းဂ်လုပ်ခိုင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်နေတဲ့ ဒေဗီရာနဲ့မာရာဟာစိတ်လွတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ ဘော်ဒီဂတ်ကြီးကိုနောက်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ် ဒေဗီရာဟာလောင်လီဆင်းဂ်နဲ့ဖုန်းထဲမှာချာရာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နီးစပ်သွားပါတော့တယ် အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှချာရာဟာလောင်လီဆင်းဂ်ကိုချစ်မိသွားတယ် တကယ်တော့ချာရာဆိုတာဒေဗီရာဆိုတာလောင်လီဆင်းဂ်မသိရှာပါဘူး လောင်လီဆင်းဂ်ကိုခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်နေတဲ့ဒေဗီရာဟာခိုးရာလိုက်ပြေးဖို့လုပ်ပါတော့တယ်… ဒီအကြောင်းတွေသိသွားတဲ့မစ္စတာဆတာဂျေဟာသမီးဖြစ်သူကိုလောင်လီဆင်းဂ်နဲ့သဘောတူပါ့မလား သတ်တော်စောင့်နဲ့သူဋ္ဌေးသမီးချစ်တိုင်းညားကြပါ့မလား…
Rating 7.1 ရရှိထားပြီး Disney မှထုတ်လုပ်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်… ဒီဝတ္တု ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အမျိုးသားစာပေဆုရ စာရေးဆရာ ကက်သရင်း ပါတာဆန် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးဝတ္တုထဲက တစ်ခုပါ။ ဒီဝထ္ထုက နှစ်ကြိမ်ဆက် အသက်သွင်းဖို့အကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတာပါ။ နာမည်ကျော် Disney က 2007 ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ (၄)တန်းကျောင်းသားလေးနှင့် ကျောင်းသူလေးတို့ စတင်တွေ့ဆုံမိရာမှစတာပါ။ တစ်ယောက်အခက်ခဲကို တစ်ယောက်ကူညီရင်း အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ချစ်ခင်ကြပုံ နှစ်ယောက်သား အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ပေါက်ရှာရင်း မှော်တိုင်းပြည်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီးရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။ ကလေးတွေဆိုပေမဲ့ ဇာတ်လေးလေးက ကလေးလူကြီးမရွေး ကြည့်မိသူတိုင်း တသသ ဖြစ်စေမိမှာပါလို့ပြောရင်း သိပ်အများကြီးညွှန်းနေရင် ပေါ့သွားမှာစိုးလို့…ဒီလောက်ပဲ ညွန်းပါရစေ.
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ဂိမ်းတစ်ခုကို ဆော့နေသလို ရိုက်ကူးထားတာကြောင့် ထူးခြားတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး Sexy မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်ကြမ်းကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရသကို ပေးစွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အသက်၁၉နှစ်အရွယ် Actionဂိမ်းဆော့ရတာကြိုက်သော ကောင်လေးတစ်ယောက်က Dance Club တစ်ခုမှာ အိမ်သာတက်နေတုန်း လူဆိုးဂိုဏ်တစ်ခုရဲ့ လျို့ဝှက်ပြောနေတာကို မထင်မှတ်ပဲ ကြားလိုက်မိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ စက်သေနတ်နဲ့မိန်းမကို အသေရရ အရှင်ရရ ဖမ်းမိရင် ဒေါ်လာ၃၀၀မီလီယမ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ မထင်မှတ်ပဲ သူအိမ်သာထဲမှာ ရှိနေတာကို လူဆိုးဂိုဏ်းကသိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉နှစ်အရွယ်ကောင်လေးက အခြေအနေအချိန်အခါအရ ထိုမိန်းမကို ဖမ်းပေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုလူဆိုးဂိုဏ်းက ထိုမိန်းမကိုဖမ်းမိရင်ဖမ်းမိ မဖမ်းမိရင် သူသေမှာဆိုတာကို သိလိုက်ရချိန်မှာတော့ သူဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ…. စက်သေနတ်နဲ့မိန်းမကိုရော ဘာလို့ဖမ်းချင်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာဆက်လက်ရှု့စားကြပါတော့..။
ဒီတစ်ခါတော့ rating အမြင့် ဇာတ်ကာား တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်ပါတယ် ဇာတ်ကား လေးကတော့ ၁၉၅၀ ကာလကို အခြေခံရိုက်ကူးထားပြီး အသက်အလယ်အလတ်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ Relation ဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတယောက်အကြောင်းနဲ့ လွမ်းမောဖွယ်ရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ကဲ ဇာတ်ကားလေးကို အောက်မှဘဲ ဒေါင်းကြည့်လိုက်တော့နော် ထပ်မညွှန်းတော့ ဘူး Download & Watch
ဒီတစ်ခေါက် တင်ပေးမှာကတော့ Castaway on the moon ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဒီကားလေးက Tom Hank သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး oscar ရခဲ့တယ့် Castaway လိုဇာတ်လမ်းမျိုးလေးပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီကားက ဟာသနဲ့ပေါင်းထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက IMDb Rating 8.1 ၊ Rotten Tommatoes 93%၊ AsiaWiki Rating 93% တို့နဲ့Rating အမြင့်ကြီးတွေရရှိထားပါတယ်။ Tom Hant ကားထက် IMDb Rating ပိုမြင့်ပါတယ်။ ဒီကားကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကပြသခဲ့ပြီး အဓိက မင်းသားဂျောင်ဂျေရောင်း နဲ့ အဓီကမင်းသမီး ဂျောင်းယိုဝန်း တို့ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Budget 5မီလီယံ နဲ့ရိုက်ကူူးခဲ့ပြီး Box Officeမှာ ၃၇ မီလီယံ ပြန် လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကားလုံးကု ၁၁၆ မိနစ်ကြာ ပြီး တစ်မှုထူးခြားတယ့် ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနာမည်ကြီးတယ့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေအပါဝင် ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲ ၈ခုမှာ ဇကာတင်ဆုအတွက် ဆု ၁၁ ဆု ဝင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ၆ ခုကိုတော့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာပိုင်းမှာ အတော် လေးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားကို မှာအဓိကသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသားကတော်တော်လေး သရုပ်ဆောင်ကောင်းပါတယ်။ Tom Hank ရိုက်ထားတယ့် Castaway လိုကားမျိုးကိုကြိုက်ဒီကားကိုကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါ တယ်။ဒီဇာတ်ကားက ယနေ့ဇာတ်လူ မှု့ဘဝတွေ မှာတွေ့ကြုံနေရတယ့် ပြသနာ နဲ့ လူတွေ သတိမထားမိပေမယ့် အမှန်တကယ် ထူးဆန်းပြီး ရုပ်ရှင် ဆန်ဆန် ဘဝတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပြသပေးထားပါတယ်။ သူတို့ဘဝလေးနဲ့ သူတို့တော့အဆင်ပြေပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း ရှင်သန်ပုံနေတွေ ၊ လူဆိုတယ့် သတ္တဝါတွေက နောက်ဆုံး ဘာမှအားကိုးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ တွေ သူ့အလိုလို ထွက်ပေါ်လာ တက်ပုံတွေကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် ဒီဇာတ်ကားရဲ့ Hiigh light လို့ပြောလို့ရမယ် ဇာတ်ဝင်ခန်းကတော့ ကျွန်တော်လဲ သဘောကျမိတယ့် အတွေးခေါ်လေးတွေကို ပြသထားပါတယ်။ မင်းသားက သူ ပဲခေါက်ဆွဲ အသေအလဲစားချင် နေတာကို မင်းသမီးကတွေ့သွားတော့ ပဲခေါက်ဆွဲ delievery ကို သွားပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မင်းသားက အမျိုးမျိုးပဲခေါက်ဆွဲတွေ ကိုတွေ့ပြီး မစားဘဲ အကုန်ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေးဆီ ပြန်ပြောလိုက်တယ့် စကားကတော့” ပဲခေါက်ဆွဲဆိုတဲ့ မျော်လင့်ချက်နဲ့ဒီနေ့အထိရှင်သန်ရပ်တည်နေတာပါ ၊ သူ့မျော်လင့်ချက်ကိုဘဲ ဆက်လုပ်သွားမယ်” ဆိုပြီး ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူတိုင်က မျော်လင့်ချက်ကိုစီနဲ့ ရှင်သန်နေကြပြီး မျော်လင့်ချက်တွေ ကုန်ဆုံးသွားတယ့် တစ်နေ့မှာ လမ်းပျော်ကသလို ခံစားရနိုင်တာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ မျော်လင့်ချက် ရှိနေသရွှေ့အသက်ရှင်ရတာ အဓိပ္ပယ်ရှိပါတယ်။ မျော်လင့်ချက်ဆိုတာကလဲ သေခါမှာပျောက်ကြမှာပါ။ ဒီကားရဲ့ဇာတ်လမ်းပိုင်းက မင်းသားက အကြွေးလည်ပင်းနစ်လာ တော့ ကိုယ်ကိုကိုယ်သတ်သေဖို့ လုပ်ပါတယ်။သတ်သေဖို့အတွက် ဟန်မြစ်တံတား ပေါ်က ခုန်ချလိုက် ကံကောင်းချင်တော့ မသေဘဲ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီကျွန်းကလဲ တစ်ခြားဇာတ်ကားတွေကလို သုမုဒ္ဒရာအလယ် မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုးလ်မြို့ ဟန်မြစ်ပေါ်မှာ သောင်ထွန်းနေတယ့် ကျွန်းလေးတစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ထဲမှာဘဲ ရှိနေပေမယ့် အော်လဲ ဘယ်သူမှမကြားရ ပါဘူး။ အဲ့လိုနဲ့ပြန်ဖို့လမ်းစမြင်တော့ သတ်သေဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ကြိုးစားပြီး မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မသေတော့ အသက်ရှင်ဖို့လုပ်ရပါတော့တယ်။ ရှင်သန်ဖို့ အတွက်ဝမ်းစာရှာပုံတော်ဖွင့်ရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူအသင့်စားပဲခေါက်ဆွဲထုပ်အခွံကိုတွေ့ပြီး ကတည်းက ပဲခေါက်ဆွဲစားရဖို့ရေးအကြံပေါင်စုံ ထုတ်ပါတော့တယ်။ အဲ့လို လူစည်ကားတယ့်မြို့အနားမှာရှိတဲ့ ကျွန်းလေးပေါ်မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း သူများနဲ့ မတူလုပ်နေတာကို ကောင်မလေး တစ်ယောက်က ကင်မရာကနေတွေ့သွားပါတယ်။ ကောင်မလေးကလဲ ထူးဆန်းတယ့် သူပါဘဲ။ သူထူးဆန်းပုံကတစ်မျိုးပါ၊ အခန်းထဲကအပြင်မအထွက်၊လူတွေနဲ့ မတွေ့တာ ၃ နှစ် ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဘယ်သူဆိုဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ဘဲ အခန်းထဲမှာ သူ့တစ်နေ့တာ အစီစဉ်တွေအတိုင်းဖြတ်သန်းပြီး အချိန်တွေ ကိုကုန်ဆုံးနသူပါ။သူမှာဘယ်လို အတိတ်ရှိခဲ့လဲမသိပေမယ့် လူကြားထဲမသွားရဲ တော့တယ့်အရာတစ်ခု ဖြစ်နေလို့ ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့တော့ဘဲအမှိုက်ပုံလို အခန်းထဲမှာ နေထိုင်နေသူလေးပါ။ တစ်နေ့တော့သူတို့ ကောင်မလေးက ဂြိုလ်သားလို့ခေါ်တယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်း ကျွန်းပေါ်ကလူကိုတွေ့သွားပြီး စာနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ စလုပ်ပါတယ် ။အဲလို့နဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းလူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဖော်ပြလို့မရတဲ့ သံယောဇဉ် ခေါ်မလား မေတ္တာစစ် ခေါ်မလား အချစ်စစ်ခေါ်မလား ဖြစ်မိသွားနေကြပါတယ်။ကျွန်း ပေါ်သောင်တင်နေတယ့် လူထူးဆန်း ကပဲခေါက် ဆွဲကိုလုပ်နိုင်သွားမလား ၊ အကူအညီရပြီး မြို့ပေါ် ရောက်သွားမလာ၊ ကျွန်းပေးမှာ သေသွားမလား၊ ကောင်မလေးကရော သူ့တစ်နေ့တာကိုဘယ်လို ထူးထူးဆန်းဆန်းနေထိုင်ပြီး ကျွန်းပေါ်ကလူနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်မလား၊ ကွဲကွာသွားမလား ၊ တစ်ခြား ဘယ်လို ဟာသတွေ ၊စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ၊ တွေးတောစရာ တွေ တွေ့နိုင်မလဲဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ခံ စားပြီး စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ P.S / Rating များဒါရယ် ၊ ဇာတ်အိမ်က ကောင်းတာရယ် ၊ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်တာရယ်၊ ပေးချင်တယ့် အချက်ကို ထိထိမိမိပြနိုင်တာရယ်ကြောင့်ကြည့်သင့် တယ့်ကားပါ။ တစ်ကားလုံးမှာ လူ နှစ်ယောက်တစ် ပိုင်းဘဲ သရုပ်ဆောင်သုံးထားပါတယ်။
2017ထွက် အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ… ရိုရှန်ဆိုတဲ့ စားဖိုမှူးက သူ့ရဲ့ ဒေါသကို မထိန်းနိုင်ပဲ စားသုံးသူနဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်.. သူ့ကိုထုတ်ရင် သူ့နောက်လိုက်တွေလဲ လိုက်ထွက်လိမ့်မယ်လို့ သူထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ လူတွေက ကိုယ့်အကျိုးပဲကိုယ်ကြည့်ကြတာပါပဲ အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ရိုရှန်က နောက်ထက်အလုပ်တစ်ခုထပ်ရှာဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေချိန် သူ့ရဲ့ကွာရှင်းထားပြီးတဲ့ဇနီးနဲ့သားဆီကို ပြန်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်… အိန္ဒိယကို ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဇနီးဟောင်းရဲ့အကူညီနဲ့ ဘက်စ်ကားပေါ်မှာ စားသောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့ပါတော့တယ်… ရိုရှန်ရဲ့သားလေးက အဖေ့ရဲ့မေတ္တာကို ငတ်မွတ်နေခဲ့တော့ အဖေနဲ့အတူရှိနေရချိန်တွေက သူ့အတွက် အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်… ဘက်စ်ကားစားသောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်း အဖေနဲ့ရင်းနှီးမှုတွေ ပိုလာနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ရိုရှန်က အလုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရပါတော့တယ် ဒီအချိန်မှာ ရိုရှန်က သူ့ရဲ့သားလေးအနားမှာပဲနေမှာလား သူ့ရဲ့ဝါသနာအရင်းခံတဲ့အလုပ်ရှိရာဆီကိုပဲ ပြန်သွားမှာလားဆိုတာကိုတော့..ဇာတ်လမ်းလေးဆုံးသည်ထိ ခံစားပေးကြပါဦး.. မိဘနဲ့သားသမီးကြားသံယောဇဉ်မေတ္တာအကြောင်း အိမ်မက်နောက်ကို လိုက်ခဲ့လို့ခက်ခဲခဲ့ပေမယ့် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း သီချင်းလေးတွေရော အိန္ဒိယစားစရာလေးတွေနဲ့ပါ တင်ဆက်ပေးထားလို့ ကြည်နူးစရာဇာတ်ကားလေးပါလို့ ညွှန်းပေးပါရစေ….
ဒီကားက ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ဆန်းပြားသလို IMDbနဲ့RTကလည်း အမြင့်ဆုံးအနေအထားလောက်မှာရှိတယ်… လူသားတို့တွင် ကလေးမရနိုင်တော့သည်မှာ ၁၈ နှစ်ပင် ရှိပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်လည်း ပြဿနာပေါင်းများစွာနှင့် ဖြစ်နေပြီး အင်္ဂလန်သို့ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသော ဒုက္ခသည်မှာလည်း အင်မတန်များနေသည်။ အင်္ဂလန်ကလည်း ဒုက္ခသည်များကို လက်မခံနိုင်၊ ရှိပြီးသား ဒုက္ခသည်များကိုလည်း ဖိနိပ်လေသည်။ ဖိနိပ်မှုကို မခံနိုင်သူများကလည်း တော်လှန်ရေးကြိုးစားနေကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဒုက္ခသည် ကောင်မလေးတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိလာသည်။ နေ့စေ့လစေ့။ ထိုကိုယ်ဝန်ကို နိုင်ငံရေးအရအသုံးချချင်သူများလည်း ရှိလာသည်။ ထိုသူများလက်မှ လွတ်ပြီး လုံခြုံရာသို့ ကိုယ်ဝန်သည်မလေး မည်သို့မည်ပုံ သွားမည်ဆိုသည်ကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ခံစားလှည့်ပါဟု ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်ကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ဒီကားထဲက အဓိက သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး Clive Owen ကိုတော့ တော်တော်များများရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…